३० दिनमा २० प्रतिशतले बढ्यो अनलाईन भुक्तानी, किन घट्यो डेबिट कार्ड लिनेको संख्या ? - Arthatantra.com
३० दिनमा २० प्रतिशतले बढ्यो अनलाईन भुक्तानी, किन घट्यो डेबिट कार्ड लिनेको संख्या ?
काठमाडौ । पछिल्लो समयमा अनलाईन भुक्तानी गर्नेहरुको संख्या करिव एक तिहाइका दरले बृद्धि भएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनमा बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सुविधा दिन भन्दै अनलाइन भुक्तानीका विभिन्न माध्यम अपनाएका थिए । सोही कारण मानिसहरु अनलाइन भुक्तानी सहज र सरल लागेकोले मानिसहरु यसतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार एक महिनामा मात्र विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्था एवं पेमेन्ट गेटवेहरुको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नेहरुको संख्या १९.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार असोज महिनामा ४ खर्ब ७० अर्ब ५१ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको अनलाई भुक्तानी भएको छ ।
भदौ महिनामा भने ३ खर्ब ९२ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
डेविट कार्ड लिने दुइलाखले घटे
मोवाइल बैंकिङ र क्युआर कोड फस्टाउदै गएपछि डेविट कार्ड लिनेहरुको संख्यामा कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार एक महिनामा डेविट कार्ड लिनेहरुको संख्यामा २ लाख १ हजार ११९ जनाले घटेका छन् ।
भदौ महिनामा डेविट कार्ड लिनेहरुको सख्या ९५ लाख ७० हजार ७९७ रहेकोमा सो असोजमा सो संख्या २ लाख भन्दा बढीले घटेर ९३ लाख ६९ हजार ६७८ जनामा सिमित भएको छ ।
पछिल्लो समयमा इन्टरेनट बैकिङ, मोवाइल बैकिङ क्वीआर कोड
भुक्तानी जस्ता फिचर्सहरुका कारण डेविट कार्ड लिनेहरुको संख्या घटेको हो । कार्डबाट भन्दा मोवाइल वा अनलाईन पेमेन्ट गर्न सहज भएकोले ग्राहकहरुले डेविटकार्ड कतिपयले लिएका छैनन् भने कतिपयले कार्डको नविकरण नै नगरेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । तर अन्य अनलाईन भुक्तानीहरुमा भने बढोत्तरी भएको तथ्यांकले देखाउछ ।
असोज महिनामा विभिन्न माध्यमबाट भएको अनलाईन भुक्तानी
वि.सं.२०७८ मंसिर २ बिहीवार १३:०८ मा प्रकाशित
News Views: 92
अघिल्लाे गरिमा विकास बैंकले १ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने, बोर्डबाट पायो अनुमति
पछिल्लाे आगलागीबाट ३५ करोडको क्षति, ८० परिवार विस्थापित